» साम्राज्ञीका लागि किन चल्नुपर्छ ‘रातो टिका निधारमा’ ?
साम्राज्ञीका लागि किन चल्नुपर्छ ‘रातो टिका निधारमा’ ?
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार ०५:५२
नेपाली फिल्मकी लिडिङ एक्ट्रेस हुन्, साम्राज्ञी आरएल शाह । सिंगो फिल्म आफ्नो काँधमा बोकेर हिँड्न सक्ने अभिनेत्री हुन्, उनी । त्यसैले नेपाली फिल्ममा उनको माग चर्को छ । मागअनुसार उनको पारिश्रमिक पनि कम महँगो छैन । एक फिल्मका लागि १६ लाखसम्म बुझ्ने गरेकी छन् । उनको स्टारडमलाई हेरेर निर्माताहरु यो रकम तिर्न खासै सोच्दैनन् । उनलाई लिएपछि फिल्म सफल हुने विश्वास मेकरमा छ ।
अभिनेतामा अहिलेका ुहटकेकु अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘ड्रिम्स’ बाट सानदार डेब्यू गरेकी उनको दोस्रो फिल्म ‘ए मेरो हजुर २’ थियो । दुबै फिल्मले बक्सअफिसमा मनग्य पैसा छापे । र, उनको स्टारडम पनि उत्कर्षमा पुग्यो । अहिलेसम्म उनी यी दुई फिल्मकै ब्याज खाएर बसेकी छन् । किनकि, त्यसपछि उनले गरेका कुनै फिल्मले निर्माता बचाएका छैनन् । न त उनले आफ्नो अभिनयको वाहवाही नै बटुल्न सकिन् ।
वर्षमा दुईभन्दा बढि फिल्म नगर्ने साम्राज्ञीको गएको दुई वर्षमा ‘कायरा’, ‘तिमीसँग’ र ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ गरि तीन फिल्म प्रदर्शनमा आए । गएको महिना उनको नयाँ फिल्म ‘मारुनी’ प्रदर्शनमा आएको थियो । तर, यी चारै फिल्म बक्सअफिसमा असफल ठहरिए । यद्यपि, चार फिल्ममध्ये ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’ ले केही हदसम्म राम्रो व्यापार गरेको थियो । तर, घरेलु बजारबाटै लगानी उठाउन भने सकेन । ओभरसिजको कमाईले निर्माता सुरक्षित भएका थिए ।